Homeसमाचारभारतका चर्चित गायक सानले गाएको नेपाली गीत ‘नक्कली कान्छी’लाई २ लाख पटक हेरियो (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 1, 2021 admin समाचार 6848
भारतका च’र्चित गायक सानको आवाजमा नयाँ नेपाली गीत सार्व’जनिक भएको छ। नक्कली कान्छी बो’लको गीतमा कार्टुन क्रुको अभिनय रहेको छ।
कार्टुन क्रुका च’र्चित अनुहार सरोज अधिकारी र आस्मा विश्वकर्मा यस म्युजिक भिडियोमा समा’वेश छन्। यस गीतलाई राकेश काफ्लेले लेखेका हुन् भने उमेश सुब्बाले संगी’त दिएका हुन्। उक्त गीतको भिडियोलाई अत्यन्तै मन पराइ’एको छ । भिडियोलाई १ लाख ७६ हजार पटक हेरिएको छ । – ओएस नेपालबाट
April 23, 2021 admin समाचार 3661
May 20, 2021 admin समाचार 4039
November 27, 2020 admin समाचार 7332
सातामा कम्ती’मा एक दिन व्रत बस्नु स्वास्थ्य’का लागि पनि राम्रो मानिन्छ । तर, व्रत सकि’एपछि मानिसहरु खान नहुने कुराहरु बढी खाएर पनि बि’रामी पर्ने गरेका छन् । दिनभरको व्रत सकि’एपछि व्रतको दिन बेलु’का अन्न खान
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (223027)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (215045)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214720)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (213012)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211894)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210837)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209443)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209338)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (178000)